Isu tinokuratidza Maitiro ekuisa Python 3.6 paUbuntu 16.04. Python mutauro wekunyora wepamusoro-soro, wakadudzirwa, unopindirana uye wakanangana nechinhu, uye...
Ichi chidzidzo chinokuratidza maitiro ekuisa uye kugadzirisa Cacti network yekutarisa chishandiso kubva kutsime kuti uve nechokwadi chekuti unowana yazvino vhezheni ...
Chii chinonzi $ SysReset faira uye kuti ungabvisa sei $ $ SysReset faira mukati Windows 10
Kana iwe wakagonesa kuratidzwa kwemafaira akavanzika uye maforodha pane yako Windows PC uye iwe unovhura iyo C Drive, unogona kunge waona...
Pfupiso: Intel's Clear Linux haisi yako yemazuva ese Linux kugovera. Yakagadzirirwa chinangwa chaicho uye inokunda mune izvozvo. Bvisa Linux iri...
Nzira yekugonesa Developer Options pane zvigadzirwa zve Xiaomi Redmi Android
Ndakatenga Xiaomi Redmi 4 Android mudziyo nguva pfupi yadarika, yangu yechipiri Xiaomi mudziyo mushure meiyo Xiaomi Mi4c yandakatenga nguva yapfuura. Midziyo miviri...
Mapepa ePDF uye muoni waro akazara mazuva iwayo. Ese mabhurawuza makuru ewebhu (seChrome, Edge, uye Firefox) anogona kupa faira rePDF, tisingataure...
Unogona kubatanidza Apple Watch yako nefoni yako yeAroid? Ndiri kureva, smartwatch i smartwatch… handiti? Iyo Apple Watch ndeimwe ye ...
Microsoft Edge ndiyo inoshandiswa mukati mokushandura mukati Windows 10. Iyo bhurawuza inogona kunge iri nyowani, asi zviri izvo, zviri nani pane Internet...
Copy and Paste Coloured Text Mutengi ane gwaro rine mavara akawanda akasarudzwa akarongwa setsvuku akandibata kuti abvunze kana pane...
Pfupiso: FSlint iguru GUI chishandiso chekutsvaga mafaera akapetwa muLinux uye woabvisa. FDUPES tsvagawo mafaera ane zita rimwechete...
Chii chiri nani pane mutambo wemahara? Zvakanaka, hapana chinhu. Kunze kwekunge zvichingo tyisa uye watambisa nguva yako inotapira kuirodha. Chokwadi,...
Mac gamers, zvinopesana nekutenda kwakakurumbira, vane akawanda epamusoro emitambo mazita ekusarudza kubva mazuva ano - zvirokwazvo, chikamu chakaoma kwazvo chiri kupfupika ...